February 17, 2021 Xuseen 9
Puntlandtimes (Muqdisho)-Guddoomiyaha Aqalka Sare ee Cabdi Xaashi cabdullaahi ayaa Goordhow Qoraan cusub ksoo saaray khilaafka ka taagan arrinta Xildhibaanada labada Aqal ee Baarlamaanka ee Gobolada ee Waqooyi (Somaliland).
War ka soo baxay xafiiska guddoomiye Cabdi Xaashi ayaa waxaa lagu sheegay in aysan jirin cid dadka kasoo jeeda Somaliland uga qeyb galay shirarkii Madaxda ee looga hadlaayay arrimaha doorashooyinka dalka ka dhacaya, sidoo kalena uusan jirin heshiis laga gaaray arrintaan.
Madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Xukuumadda ayuu ku eedeeyay Cabdi Xaashi inay dadaal adeg u galeen in aan laga hadlin arrimaha doorashada ee Xildhibaanada Gobolada Waqooyi, isla markaana faafiyeen warar been abuur ah oo aan waxba ka jirin.
Gudoomiye Cabdi Xaashi ayaa qoraalkiisa ku cadeeyey in doodiisu aaney ahayn In Guddiga isaga iyo Mahdi Maxamed Guuleed Khadar amaba Qof kaleba loo kala qaybiyo ee isugu yahay oofka xaqa u leh Maamulka Kuraasta Soomaaliland.
Dowlad Goboleedyada dalka iyo dadka kale ee ku jira xal u helida doorashada Soomaaliya ayaa u Guddoomiye Cabdi Xaashi u caddeeyay in dadka kasoo jeeda Somaliland ay doonayaan in iyagu ay u madax banaanadan maamulida doorashada Xildhibaanada Gobolada Waqooyi, iyadoo la marayo hanaan Guddi sare.
Waayeelka SIYAASIYIINTA XANAAQSAN waa in la tixgeliyaa, oo qaybta HA loo dhiibaa!
Mudane Cabdi xaashi wuu saxan-yahay Farmaajo xaare waxuu rabaa inuu boobo vote ama codka gobolada waqooyi taasi dhici meyso. Aniga kama soo jeedo gobolada waqooyi laakin waxeey xaq u leeyihiin in shirka baydhabo laga qeyb galiyo hadii aysan isku duubneyen. Maamulada Puntland, Jubbaland,kooxada cabdi xaashi iyo mucaaradka waa in geesaha laga galaa farmaajo hadiikale SOMALIA wey ku deysay
Abdulfatah Farah Abdi says:
. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت
Waxaa layaab leh oo ah wax laga xishoodo haddii in uun ixtiraam jiro…cabdi xaashi yaa doortay ma Somaliland baa doortay mise cidkale.
1.Somaliland mar iyo lababa waxay idiin cadaysay oo ay beesha caalamka u cadaysay inaanay Somaliland ka mid ahay Dawlada Fardaraalka Somaliya.
2. Waxay cadaysay inaanay ahayn Dawladgobaleed.
3. Idinka iyo caalamka ayaa ka markhaati ah inaanay Dawlad gobaleed ahayn oo waydinkaa arkaaya inaan Meelnaba looga yeedhin Somaliland.
4. Suaasha is weydiinta mudan Dadka ka soo jeeda Somaliland ee Dawlad Somaliye ku jiraa ma dhibay ku hayaan Somaliya misa wanaag taa ayaa u baahan inaydun ka faalootaan.
5.Daka reer Somaliland waxay u yaqaanan Cabdi xaashi gudoomiyaha jaalida Somaliland..sida ay Somaliland ugu leedahay jaaliyad Kenya,Ethiopia, UK, Denmark,…
6. Dadka ka soo jeeda Somaliland ee ku jira Dawlad Soomaaliye waxay ka mid yihiin dhibaatooyinka Soomaaliya haysta..waxaan siddaa u leeyahay malaha ajende siyaasadeed oo dad ay matalaan ma jiro oo aan ahayn Dadka ku dhaqan Jaaliyada Moqdisho ee ka soo jeeda Somaliland.
7. SOOMAALIYA waxay u baahanyahay inay marka hore Dawlada dhexe iyo Dawladgobaleedyo oo aanay dadka ka soo jeeda Somaliland aanay ku jiray ay doodaan oo ay heshiis gaadhaan, markaa haddii ay hadal la galayaan Somaliland ay la galaan.
8. Inta ay Dad ka soo jeeda Somaliland ay ku jiraan Labada Guri ee Dawlada Federalka Soomaaliya, Somaliland IYO SOOMAALIYA heshiin maayaan. Soomaaliya waxay u baahanyahay inay gudeheeda xal ka gaadhaadhaan marka hore.
9.Dadka ka soo jeeda Somaliland ee ku jira Dawlada dhex waxay la mid yihiin Maahmaa baa jirta la yidhaahdo…. WARAABE DHINICII LOO ERYAABA WAA U DHINICII KALE…MARKAA DADKA KA SOO JEEDA SOMALILAND LIISKA AYUUN BAA LUGU BUUXSADAA.
Waad riyooneysaa waayo waxba lama socotid.
Somaliland ama waqooyiga SOMALIA waa gobol katirsan SOOMALIYA teedakale dadka Soomalida ee dega waqooyiga qaar ka mid ah ama 60% marabaan iney Soomaliya ka go’aan marka hore afti ha laqaado maha in hal reer afti loo qaado. Xildhibanda waqooyiga ama Somaliland ee jooga xamar waxeey matalaan waqooyiga soomaliya ama Somaliland hadba qofka siduu u yaqaan….markey dowlada noqoto la aqoon sanayahay Somaliland markaas ma matalaan Somaliland CAQALI CARUUREDKA AAD MEESHA KU HEYSO DHAAF
Wax aan jirin , Somaliland waa dal madax-bannaan oo la yiraahdo
Republic of Somaliland. The game was finished between Federal Somalia and Republic of Somaliland in the year 1991 with kish the king. The South is in conflict with itself, no body knows when it will reach to peace.
Soomaalya Soomaali baaleh, ninkii aanan taa ku qanacsaneyn, Itoobiya ha aado!
Hal qabiil oo rabo in uu yiraahdo aniga ayaa u hadlaya, illaa iyo 4 qabiil oo deegaanka la leh, waa waalli qaawan. Ninka Dhulbahanete ee aay marna ku dhex dharbaaxaan Baarlaanka Qoyskooda, marna Af hayeenkiisa ku sheegaan waa kii ayaan dhoweyto Laasacaanood ka lahaa, Hargeeysa “IS XAMBAAR” Baa nalooga yaqaanaa!
3 Xisbi ku sheeg baad sameeysateen, sadexdana Iidoor baa leh, waxaadna rabtaan in aad qabaa’ilka kale ee dhulka idinla leh ku qancisaan, in aay idinku raacaan maamul uu qoys leeyahay oo “IS XAMBAAR” looga yaqaano go’itaanliisa!
Ma garan karo cid kaleba ha joogtee, waxa Gunnimadaa ku qasnaya ninka DAAROODKA ah, ee KABLALAX ka ah, ee uu ILAAH HARTI ka dhaliyey, Daaroodna dhabarka ku haya!
Marka, Haddii aay ragga Muqdisho joogo agtiinu JAALIYAD ka yihiin, inta Iidoorka ah un baa ah ee cidi kulama aha!
Somaliland waa dal madax banaan weligiinba Is diidsiiya.
Marnaba haku riyoonina in somaliland tacabka galay iyo dhibkii loosoo maray in reer koonfur wax la wadaagto waa waxaan dhacayn kii Ooyaya kii Qabiil ku rafanaya kii iska riyoonaya iyo waxaan jirin Midnimo bug ah Nin walba taa ha ogaado Hadii xitaa lagu Rogmanayo never ever Midnimo iyo lugooyo danbe.
Waa lagu badhaadhay waa ka raysanay Koonfur.
Awalba dadka reer somaliland ayaa u caqli iyo cilmiba wadey markay ka tageena waa kuwaa 40 years Xaarka walaaqanaya dhinacwalbana ka baaba’ay.
Im proud to be somalilander.
KAN XADE waa laangaab cuqdadeysan waa nooca ku gabadha yaaa Daaroodaay waa Fulay Xaarweyna ah waxa uu ku riyoodaa in Harti laga gooyo somaliland kkkkkkkl waa bahal xayawaan bilaa caqliya dadka noocaasa yaan loo jawaabin.
Waa Laangaab Ehelu Naar ah.
Wuxu ku ciilbaxaa cayda iyo nacaybka reer somaliland bal u fiirsada haduuba Arko magaca somaliland balaayo ayaa ku dhacaysa hurdada ayuu kasoo boodaa markaas ayuu cay bilaabaa iyo nacli si uu Nafiso.
Nacalatul caleek Yaa Laangaab Ehelu Naar.
Nin Daarood ah marka uu laangaab noqdo, adoo Iidoor ah maxaad noqoneeysaa?! Kkk
Xitaa haddii aan ahay jifada Daarood ugu yar, mar waliba Libaax duq ah, 10 Weer ka fariidsan!
Fg. Dal Somaliland la yiraahdo oo uu Calan u babanayo uu xur ah arki meeysid, inta aay kuwa qaddiyadaa u xiiqsan ee meelaha ka caaytamaya wada yihiin Iidoor soocan!
Rajada Dal Somaliland la yiraahdo oo xur ah waxaa kuugu dhow. Maalintaad aragto, niman iyo gabdho ah, Warsangeli, Dhulbahante, Samaroon iyo Ciise oo halkan Soomaali ka carar ku muujinaya oo sidiina oo kale u xiigsan!
Inta ha horreeysa, reer Marqaanow durbaankiina beenta ku dhisan iska garaacda oo “ZOOMAALIYAA” ku haya! kkkk
Bacaaaaaacda gur nacaybka god baad la geleysaa taa ogow.
Suaalaha ka jawaab Yaa Jaahil.
1- somaliland 30 sano waad kadaba yuuseyseen maxaa u dhinteen?
2- somaliland mojority qabiilooyinka wada degaa makula tahay inaad ka dhex kuluumaysan kartaan waxna yeeli kartaan?
3- makula tahay in cidi is hortaagi karto himiladayda iyo Yoolkayaga?
4- calanka somaliland iminka waxu ka babanayaa Min Looyacado ilaa buuraan Agteeda Salka hoose Sanaag Bari maka dejin karta Calankaa 30 sano ka babanaya?
Ciise/samaroon/dhuloos/waroos Waxay ku gowracan yihiin waxa mojority’gu doonayo oo ah Dal somaliland la yidha Somaliland maxaad ka bedeli kartaa xaqiiqda hortaada taal?.
Nacnac looma baahna waxba ma yeeli kartid adiga iyo noocaagas Xanuunsanaya somaliland bal waakaase Somalia ka dhig dalkaa Barakeysan ee somaliland waxaad doonto soo kaxayso what eve you Can.
Waxa kugubaya waan ogahay waayo Laangaaab baa tahay cuqdad qaba.
Mid iga hoo iga rumayso inaan somaliland meelna usocoto waxay nagu joogtaa Xinjiro
iyo dhiig iyo maal loosoo huray ilaa maalinta ugu danbaysana ku difaacayna waxkasta oo ay nagu qaadaneyso adigase ciyaar ayaad ku jirtaa.ninkii somaliland rabin waa inuu guuraa thats the trues ku biyo cab.